H&M olu na ị na-apụghị uche a n'oge okpomọkụ | Bezzia
Susana godoy | 17/06/2022 11:00 | Emezu
Anyị rutere n'oge ahụ n'afọ ebe uwe na-enwekwu olu olu na ebe akpụkpọ ahụ na-enwekwu mmetụta. N'ihi ya, complements n'ụdị olu olu dị ka nke H&M nwere. N'ihi na oge a ha na-ewe ọtụtụ ihe, n'ihi ya, ị gaghị enwe ike iguzogide ihe niile anyị kwadebeere gị.
Nchịkọta echiche na njedebe nke ga-enye ndụ gị mma. Oge erugo nzọ na kasị mbụ echiche weputa ihe kachasi anyi uto. N'ụzọ dị otú a, ọdịdị nke ọ bụla anyị na-eyi na-enyekwa ya aka ahụ nke na-amasị anyị nke ukwuu. Naanị ị ga-ahọrọ imewe ọkacha mmasị gị.
1 Ụdọ akwara atọ na H&M
2 Olu ọla edo nwere obere ifuru
3 Igodo atọ na mkpọchi pendant
4 'Enyi kacha mma' pendant
5 olu olu pel
Ụdọ akwara atọ na H&M
Otu n'ime nnukwu ọnọdụ nke oge bụ nke a. Ọ bụ olu eriri atọ.. N'ihi na ijikọta pendants mgbe niile bụ ihe ọzọ dị mma iji nyekwuo ọdịdị ọdịdị ọ bụla anyị na-eyi. Ma n'okwu a, nchikota a adịghị mkpa n'ihi na olu nwere n'ezie ntụgharị atọ ọnụ. Yabụ, onye ọ bụla nwere mmecha pụrụ iche. Nke kachasị ogologo bụ nke agbụ mara mma nke nwere obere nrite. Mgbe na nke abụọ anyị na-ahụ usoro nke obere bọọlụ na-achọ ya mma ka ọ kwụsị na agbụ nke nnukwu njikọ. Obi abụọ adịghị ya, ihe karịrị nhọrọ zuru oke iji nye ọdịdị nke ụdị anyị.
Olu ọla edo nwere obere ifuru
Ọ dị ka aka ọla edo bụ otu n'ime nnukwu ndị na-akwado oge. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na-amasị gị ọlaọcha, ị ga-enwekwa olu gị na njedebe ahụ. Maka oge anyị na-anọ na nke mbụ mana n'ụdị choker. Nhọrọ ọzọ bụ isi mgbe anyị na-ekwu maka ngwa. Ya mere, ọ dịghị ihe dị ka icho mma n'olu na-acha ọla edo na-egbuke egbuke na zuru ezu na usoro nke obere beads dị ka okooko osisi. Ụdị kachasị mma ga-abụ nke na-esonyere gị ekele maka echiche dị otú a. Zuru oke maka uwe elu gị kamakwa maka uwe kachasị mma nke oge okpomọkụ.
Igodo atọ na mkpọchi pendant
Anyị na-aga n'ihu na agba ọla edo na otu n'ime mmecha ndị ahụ anyị hụrụ n'anya. Ọ bụ mmetụta atọ dị ugbu a ọzọ. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, anyị chọpụtara na agbụ ndị ahụ n'onwe ha sitere na njikọ dị mma na ndị ọzọ nke ụdị agbakọtara, bụ nke mbụ. Mana maka mmalite, anyị nwere ma igodo na mkpọchi. Nkọwa abụọ zuru oke nke anyị maralarị na-akwado ibe anyị nke ọma ma ugbu a, ha ga-eme ya ọbụna karịa n'olu anyị.
'Enyi kacha mma' pendant
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme onyinye okpomọkụ dị mma nke ga-adịru ndụ, mgbe ahụ ị nwere ihe ọzọ nke olu olu nke ị ga-amasịkwa, na ọtụtụ. N'ihi na inwe ezi ndị enyi na-adị anyị mkpa mgbe nile ná ndụ anyị. Yabụ, ọ bụrụ na anyị nwekwara ike na-eyi ya mgbe niile dị ka ụtụ n'olu anyị, ka mma. Ọ bụ pendant nwere obi mara mma ebe okwu 'Enyi kacha mma' bụ ndị na-akwado ya nke otu. Ya mere, ị nwere ike iyi otu na enyi kacha mma ma ọ bụ enyi, nke ọzọ. Ka e were mara na unu na-enwe otu mmetụta ahụ!
olu olu pel
O yiri ka anyị na-ekwu okwu banyere olu olu atọ ọzọ, abụọ n'ime ha yiri ma nke atọ ga-abụ echiche ọhụrụ na ị ga-amasị ọtụtụ. N'ihi na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na abụọ yiri nke ahụ bụ nke nwere obi gbajiri agbaji na juputara na zircons, echiche ahụ na-aga na nke atọ na esemokwu nke ahụ bụ. mebere usoro nke obere pearl. Obi abụọ adịghị ya, ndị mmadụ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma dị ka anyị na-ahụ, ọ dịghị mgbe ọ na-apụ apụ. Ya mere, anyị aghaghị iburu ha n'uche. Ụdị na mbụ ga-enwu site n'olu gị. Kedu n'ime olu ndị a kacha amasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Emezu » Nchikota nke olu H&M nke ị na-agaghị echefu
Oghere nkeonwe na mmekọrịta ịhụnanya